Dr Abiy: ciddi ka dambeysay rabshadihi dhacay tallaabbo adag ayaan ka qaadeynaa |
Ra’isuwasaaraha dalka Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa sheegay dhibaatada dhacday ciddi ka dambeysay in sharciga lala tiigsanayo.
Ra’isuwasaaruhu wuxu xalay uu soo saaray warmurtiyeed uu kaga hadlayo dhibaatada dalka Itoobiya ka dhacday oo ay dad badanna ku naf waayeen.
Warmurtiyeedka Ra’isal wasaaraha oo dhammeystiran halkan kaga bogo.
“Marka hore waxaan doonayaa inaan idinla wadaago murugada iyo tiiraanyada dadki naftooda ku waayey rabshadihi maalmahan ka socday qayba ka mid ah dalka Itoobiya.
Dhibaatada na soo food saartay sidi aan u xakameyn lahayn haddii aan dhammaanteen iska kaashan waxa ka iman kara waad dareemi kartaan khatarta iyo foolxumada ay leedahay.
Waxaa la isku dayay rabshadaha dhacay in laga dhigo kuwa qabiil iyo diin ku saleysan, waxaana halkaasi si aad looga naxo ugu nafwaayey dad aad u badan.
Inkasta oo aan ka xunnahay dhibki dhacay iyo khasaaraha naf iyo maalba leh ee ka dhashay haddana waxaan ogaannay inuu shacabka dalka Itoobiya yahay shacab aad u weyn oo dulqaad badan.
Waxaan aragnay dad Kirishtan ah oo masaajidda in la gubo diiddanaa oo ka soo horjeestay oo qaarkood ay naftoodaba ku waayeen iyo dad muslimiin ah oo iyaga Kaniisadaha in dhib loo geysto difaacayey.
Sida oo kalana dad badan ayaa naftooda qaaliga ah ku waayey iyaga oo doonaya iney badbaadiyaan dad lagu beegsanaya qabiilka ay ka dhasheen.
Arrimahan oo dhan sababta ay noogu dhacayaan waan garaneynaa. Haddii xitaa aan la kulanno caqabado kuwan ka ballaadhan marnaba kama weecaneyno tubta aan cagta saarnay. Waxkasta oo caqabad ah oo na hor istaago waddadeenna ayaan ka wecineynaa socodkeennana waan sii wadaneynaa.
Kooxaha dhibaatadan noo horseeday waxaan u shegeynaa inaan diyaar u nahay naf inaan u hurno si aan u xaqiijinno badhaadhaha Itoobiya iyo shucuubta dalka.
Sarreynta sharciga si aan u meel marinnana cid kasta oo wixi dhacay ku lug lahayd sidi tallaabbada ku habboon looga qaadi lahaa ayaan si adag oo aan labalabeyn lahayn uga howl galeynaa.
Dhibaatadi foosha xumeyd ee dhacday dadki ku waxyeelloobay sidi ay dhibka uga soo kaban lahaayeen, dadka barakacayna deegaannadooda loogu celin lahaa, dadka hantidooda la dhacayna dib u dejin looga sameyn lahaa ayaan ka shaqeyneynaa innaga oo kaashaneyna shacabkeenna.
Haddii aan kala qaybsanaanno waxaa guuleysaneysa cid kale. Innaga ishayno midkeenna ma guuleysanayo. Cadawgeenna waxay ay doonayaan inaan noqonno wixi dhacay ayaa tusaale noogu filan.
Haddaba, dhibaata intan ka weyn si ay markale noogu dhicin dowladda iyo shacabkuba waa iney sameeyaan wixi la gudboon. Dowladda wixi la gudboon oo dhan wey sameyneysa.
Shacabkuna waa inuusan kala tagin, dadka siyaasadaha wax burburiya wata ay ku adeegan, uu midba midka kale gaashaan uu u noqdo oo dhibta uu ka difaaco, dambiilayaashana ay sharciga horkeenaan, dadki ay dhibaatada soo gaartay sidi ay u caawin lahaayeenna ay kaalintooda ka qaataan ayaa soo jeedinayaa.
Wakaaladda wararka Reuters oo soo xigatay Taliyaha Booliska degaanka Oromada ayaa sheegay dadka rabshadaha dalka Itoobiya ku dhintay inay tiradoodu gaadhay 67 qof.
Maalinti shalay ahaydna BBC oo soo xiganeysa xogaha ay ka heshay madaxda dalka Itoobiya, xirfadlayaasha caafimaadka iyo dad goob joog ah iney tiradu dadka rabshadaha ku dhintay ahayd 44, maantana tirada dhimashada ay ku kordhay 12 qof oo kale.